Sarkaal Ka Tirsanaa Al-shabaab oo Isku Soo Dhiibay Maamulka jubbaland – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Magaalada Kismaayo ee xarunta dowlad goboleedka Jubba-Land waxaa maanta lagu soo bandhigay sarkaal ka tirsanaa Al Shabaab oo isku soo dhiibay maamulka Jubba-Land.
Wazaaradda amniga ee Jubba-Land ayaa warbaahinta usoo bandhigtay sarkaalkan oo ay magaciisa ku sheegtay Sharmaarke Cabdinaasir Axmed, waxa ayna intaas sii raacisay wazaaraddu in ninkani uu Al Shabaab ka tirsanaa 10 kii sano ee lasoo dhaafay.
Degmada Jamaame oo ka tirsan gobolka jubbada hoose ayuu kasoo baxsaday sarkaalkan isi soo dhiibay sida uu sheegay afhayeenka wazaaradda amniga Jubba-Land.
Afhayeenka wazaaradda amniga Jubbaland Cabdinuur Ibraahim oo la hadlay Radio Simba ayaa sheegay in sarkalkan isi soo dhiibay uu kamid ahaa kooxda jugta culus loo yaqaan ee fulisa weerarada ka dhanka ah ciidamada dowladda iyo kuwa Amisom.
Waxa uu sidoo kale sheegay afhayeenku in sarkaalka isi soo dhiibay uu qaabilsanaa dhanka miinooyinka islamarkaana uu hadda ahaa tababare dhanka miinooyinka ah.
Afhayeenka ayaa xusay in ay soo dhaweeyaan dagaalyahanada kasoo baxa Al shabab, waxa uuna tilmaamay inay u sameeyaan dhaqan celin, ganacsina u abuuraan si ay dadkooda uga mid noqdaan.
Tirada dagaalyahanada ka tirsan Al Shabab ee iska dhiibaya deegaanada Jubba-land ayaa kordhay bilihii lasoo dhaafay, waxaana bishii hore in ka badan sagaal dagaal yahan oo ka tirsanaa Al Shabab ay iska dhiibeen gobolka Gedo.